को हुन् प्रदेश प्रमुख बन्ने भाग्यमानीहरु ? | My News Nepal
को हुन् प्रदेश प्रमुख बन्ने भाग्यमानीहरु ?
काठमाडौं । सरकारले लामो कसरतपछि आज ७ वटै प्रदेशको प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकेको छ । सरकारले तोेकेका प्रदेश प्रमुखहरु अधिकांश पूर्व प्रशासक रहेका छन् । त्यस्तै कोही समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ समेत रहेका छन् । विभिन्न विरोधका बावजुद सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेको हो । पायक नै नपर्ने कोल्टो स्थानलाई पनि सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेपछि चौतर्फी रुपमा विरोध शुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी मुकाम मकवानपुरको हेटौंडा तोकिएको छ । जुन कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकार छाड्ने बेलामा गरेको यो निर्णय विवादित बन्ने देखिन्छ ।
सरकारले प्रदेश नम्बर १को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी अस्थायी मुकाम तोकेको हो।
सरकारले आज तोकेका प्रदेश प्रमुखहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
डाक्टर गोविन्द सुब्बा
प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्द सुब्बा कांग्रेस निकट विद्वान नेता हुन् । प्राध्यापक समेत रहेका उनले धनकुटाको सिधुवा प्राविबाट प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेका थिए भने गोकुण्डेश्वर माविबाट एसएलसी पास गरेका थिए ।
धनकुटा क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका डा. सुब्बाले कीर्तिपूर बहुमुखी क्याम्पसबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। त्यसैगरी उनले भाषा विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अहिले उनी नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा भाषा विज्ञानका प्राध्यापक हुन् ।
प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सचिव हुन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिवसमेत रहेका उनीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसमेत भएर काम गरेको अनुभव छ । लण्डन इम्पेरियल कलेजबाट भूविज्ञानमा एमएस्सी गरेका कायस्थलाई जलस्रोत विज्ञका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । उनी प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक उम्मेदवारसमेत छन् ।
प्रदेश नम्बर ३ की प्रमुख अनुराधा कोइराला चर्चित समाजसेवी हुन् । माइती नेपालकी अध्यक्ष समेत रहेकी कोइराला सन् २०१० मा सिएनएन हिरो बनेकी थिइन् । उनले सन् १९९३ मा माइती नेपाल नामक संस्था स्थापना गरेर बेचिएका महिला तथा बालबालिकाको उद्धारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएकी छन् ।
कालिम्पोङको सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट स्कूलमा अध्ययन गरेकी कोइरालाले काठमाडौंका झण्डै २० वर्ष अध्यापन गरेकी थिइन् । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा सहायक महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बनेकी कोइराला उनी मंसिरमा चुनाव हुनु केही दिनअघि मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन्। सबैको मन र मस्तिष्कमा बस्न सफल कोइरालाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नेमा अधिकांश जनता विश्वस्त छन् ।
प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् । लामो समय वकालती पेशामा आबद्ध कुँवर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यााधिवक्ता भएक थिए। अर्घाखाँचीका स्थायी वासिन्दा कुँवर नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । पछिल्लो समय भने उनी विवादित बने । आइजीपी प्रकरणमा उनी विवादमा तानिएका थिए । सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध नै लडेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी नवराज सिलवाल निकट रहेर काम गरेको कुँवरमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ का प्रमुख उमाकान्त झा नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक तथा पूर्व मन्त्री हुन् । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदमा स्वास्थ्य मन्त्री भएका झा त्यसअघि उद्योग सचिव थिए । झाले मुख्य सचिवमा लिलामणि पौडेलको नियुक्तप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनी आफै मुख्यसचिव हुनुपर्ने भन्दै मधेशी मोर्चाको शरणमा गए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अस्वीकार गरेपछि अन्ततः उनले राजीनामा दिएका थिए । उनी राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी हुन्।
प्रदेश नम्बर ६ का प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल पुराना कांग्रेसका नेता हुन् । बहुदल आएपछि कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत बनेका खनाल पूर्व सांसद समेत हुन् ।
प्रदेश ७ का प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल कैलालीका स्थानीय हुन् । मल्ल राजनीतिज्ञ पनि हुन्। केही समयअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका उनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य पनि थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मल्ल केही वर्षअघि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए।